Zeus is popular slot game that is entirely based on mythological Gods. विषय धेरै विचित्र र खेल्न रोमाञ्चक छ, पनि यो साँचो हुन अझै पनि राम्रो छ कि केहि शानदार बोनस आउँछ. के यो खेलको बारेमा रोमाञ्चकारी छ तिनीहरूले थप दुई समान खेल शुरू गरेको छ. यसको लोकप्रियता को कारण, मान्छे यो भन्दा बढी गागा जाँदैछन्. If you like some history-based games with magnificent graphics then this New Slots with No Deposit is the right stop for you.
Zeus स्लट विकासकर्ता बारे
Zeus is developed by the multinational company WMS that has been making some wonderful games. Looking at the popularity of this New Slots with No Deposit game, WMS has already started adding some new features with the launch of subsequent versions. कम्पनी ग्राहकहरु को प्राप्त गति यी विगतका केही वर्ष सबै रेकर्ड भङ्ग भएको छ. With the expertise instilled in this New Slots with No Deposit game, तिनीहरूले समय सफल र फेरि छ.
Zeus हुन्छन् 30 paylines र5खेल भर धेरै संयोजन विजेता को सुविधा रील सिस्टम. तिनीहरू एक सुविधा भनिन्छ पुन कताई संग बुझ्न तपाईं आफ्नो पुरानो winnings पकड मा राखन पुन: स्पिन कहाँ र गर्न सक्छन् कुनै जम्मा संग नयाँ स्लट अनुभव प्राप्त सजिलो छ कि एक बिजुली विषय छ.
यो पौराणिक विषय परमेश्वरले आफूलाई र उमंग र वीणा जस्तै केही अन्य वर्ण विशेषताहरु. तिनीहरू पनि चाँदी र सुनको सिक्का छ. यो स्लट मेसिन छ3महत्त्वपूर्ण प्रतीक स्क्याटर, बिजुली र परमेश्वरले आफूलाई.
बिजुली प्रतीक भने ट्रिगर तपाईं धेरै बोनस र विजेता संयोजन प्राप्त गर्न सक्छन् तर स्क्याटर र चमकती संयोजन काम गर्ने छैन. उच्चतम विजेता प्रतीक परमेश्वर आफैले छ तर यो मात्र एक समूह मा प्ले गर्दा काम गर्दछ.
तपाईं केही वास्तविक नगद जित्न सक्छौं $2,500 तपाईं एक निष्पक्ष रकम wager गर्दा $150. मेसिन पनि न्यूनतम लाइन शर्त संग एक समयमा भनेर एउटा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सिक्का प्रदान गर्दछ 0.30 डलर र अधिकतम मा $5. तिनीहरू पनि अटोप्ले समय बचत विकल्प जहाँ तपाईं अटोप्ले क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो प्राथमिकता सेट गर्न सक्नुहुन्छ छ.
WMS मुक्त खेल को सुविधा केही विशाल लोकप्रियता आनन्द उठाए छ र धेरै ध्यान garnered छ. खेल को सेटिङ नै एक धेरै राम्रो सुविधा छ र यो बोनस र सिद्ध ग्राफिक्स आउँछ धेरै सराहना गर्दै छन्. कुनै आश्चर्य कुनै जम्मा खेल यो नयाँ स्लट आफ्नो ग्राहकहरु बीच यति लोकप्रिय छ.